Richard M. Stallman muMar del Plata | Linux Vakapindwa muropa
edumix | | Misangano / Zviitiko / Hurukuro
Nezuro, uye sezvandanga ndambotaura, ndaive nerombo rakanaka kuenda ku Richard M. Stallman kutaura muguta re Mar del Plata.
Kunyangwe akapa hurukuro mbiri, imwe yechikamu chake nhasi uye hurukuro nezuro yaive mukati meiyo ITU-T Kaleidoscope Musangano: Kugadziridza kweDhijitari Kubatanidzwa yakarongedzwa ne ITU (International Telecommunication Union).
Sei kumuona mune iyi hurukuro uye kwete mune imwe? Zvikonzero zviviri: varongi veimwe hurukuro vakatora nguva yavo kusarudza nzvimbo uye nguva (asi pano hatisi kuzokurukura kunze kwesangano) uye nekuti paive nechinhu chinonakidza muhurukuro yeITU: Stallman anga asiri mumuto wake.
Ndiri kurevei Stallman anga asiri mumuto wake? Kuti muhurukuro iyi pakanga pasina mapoka evashandisi e GNU / Linux. Paive pasina vanhu vaiziva mutsauko uripakati GNOME y KDE, uye pamwe vanga vasingazive iyo FSF, marezinesi, mapakeji akavanzika kana gungwa nemotokari. Hapana kana.
Musoro wechikamu icho chawakaratidzwa RMS semueni zita rake rainzi Kubatanidzwa kwedhijitari chinhu chakanaka here? uko nyaya idzo neimwe nzira kana imwe yatinogara tichikurukura munzvimbo ino dzakakurukurwa.
* Kudzora kweruzivo rwedu pawebhu, takabatana nerunyararo nerusununguko zvatinazvo sevashandisi;
* Software sebasa, uyo mumaonero ake mubvunzo unotyisa, nekuti mukuwedzera pakusakwanisa kuwana kodhi, isu hatina kunyange vanokwanisa kuitiswa;
* Proprietary Software uye nemabatirwo ayo ainoita pachena uye yakasununguka rusununguko maererano nezvataizoita nepfuma yedu (kuigovana, kuteedzera, kuchinjira kune zvatinoda, nezvimwewo);
* Yemahara Software sesarudzo pane Proprietary Software ;
* Mikana yekuitwa kweFree Software maringe neProprietary Software.
Kuverenga musoro wenyaya unozoona kuti isu tinogara tichitaura nezve chinhu chimwe chete, iwo musoro wehurukuro ndiyo yawakambofumura uye kuti, kana uchirangarira, renaissance Akanga atiudza pane imwe nguva.
Kubva kwandaive, iwe wainyatsoona zvinyorwa zvemamwe evaya vaipinda hurukuro. Dai iyo yakanaka RMS yakanga yakumbira kutendeuka ichiratidza mabhuku ekunyorera, zvirokwazvo angadai akave neshungu kwazvo, nekuti vangangoita vese vaive neWindows, uye imwe, Mac OSX. Chikamu chehurukuro chakatsaurirwa kubvunza mibvunzo chaive, chine muto kwazvo, nekuti vaipinda vakabvunza mibvunzo imwecheteyo yatakazvibvunza tese patakafunga kutanga kushandisa mahara software:
* Ndinoziva sei kuti hapana yakaipa code, backdoors kana bugs mune yemahara software?
* Ndiani anodzora yemahara software?
* Ndingaite sei kunyorera zvibvumirano, marezinesi uye nezvimwe? Isu tatoziva kuti rusununguko rwakawanda harwune pundutso, hapana kusadzora kune mumwe munhu.
* Nei uchichinja nzira yandinoita nayo zvinhu zvandinoita kune imwe iyo inotora nguva yakawanda uye isingashande? Uyu mubvunzo waishamisa chaizvo, murume weBMM aibvunza akatadza kunzwisisa kuti nei RMS ichiita chimwe chinhu kunze kwekufungidzirwa uye kuti zvaizotora nguva yakareba, uye RMS haina kunzwisisa zvaireva nekusashanda. Vakazopedzisa kuvhara mubvunzo ne kusatendeka kwazvo "... OK ..." kubva kuna IBM ishe.
* Zvese izvi zvaunotaura zvinonzwika zvakanaka kwazvo mupfungwa, asi zvinonzwika kunge chemakomunisti kwandiri. Ndinofanira kukuudza izvozvo, chokwadi, murume iyeye akanaka paakamuti komunisiti pamberi pevamwe vese, moyo wangu wakamira. RMS yakanyemwerera, yakagadzirisa vhudzi rake ndokumupindura nenzira yakanakisa yekuti kana isu tese tichiziva kuti chikomunizimu chakakundikana zvakanyanya uye kuti software yemahara inoitirwa kudzivirira rusununguko rwemunhu anoshandisa software, hapana nzira ingangodaro ichienderana necommunism. Nyore, acid uye yakajeka.
Ndiwo waive wekupedzisira mubvunzo (tenda denga vanoziva zvavangadai vakauya nazvo mushure meizvozvo), uye mushure mekuwombera kunoenderana, ndakasara ndichifunga kuti kunyangwe munhu wese achiombera, hapana aingogutsikana nezvaaitaura RMS. Kwete kamwe chete.
Hondo (mumaonero angu) yakarasika.
Shanduko iri muzvizvarwa zvinotevera. Ngativei nechinangwa chekusimbisa kudzidziswa kwemahara software muzvikoro, kubva kumatanho ekutanga. Ini handioni imwe nzira yekushandura pfungwa yakadzika midzi seiya yaive pachena muhurukuro iyoyo.
Ini ndakamirira makomendi ako mune izvi, pachangu ini ndichakusiya ndichikuudza mufaro wakakura wekuona pamunhu Richard M. Stallman uye kudada kwakadzama kwandainzwa pandakaona kuti, kunyangwe ini ndisiri munhu anonyanyisa mushandisi wesoftware yemahara, ini handina kunamira mubhokisi repfungwa rakavharwa zvekuti ndisingazive kuti murume iyeye aitaura pamusoro pechinhu chinogoneka, uye kwete ye isingabvumike utopia. Nhanho imwe padhuze nekuve muridzi wechokwadi wePC yangu. Mazuva ese ndiri padyo ...
Chii chamunondiudza imi varume, mudiwa? Dhijitari kunyange chinhu chakanaka?
PS: Mhando dziri mumufananidzo ndi @ marceloalegre neni, uye mifananidzo yakanaka ndeye Christian Becker uyo akanditendera kuti ndiashandise. Kumbundira kukuru pamwe nekutenda vehukuru hwakaenzana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Richard M. Stallman muMar del Plata: pane kuiswa kwedhijitari
Ini ndakaendawo kunozviona, asi muCapital umo ini ndiri kungotaura nezvemahara software. Iyo shit kana mumwe munhu asingazive Stallman kana kutaura kwake uye mutsara wepfungwa, akamushoropodza.
Stallman murume mukobvu, iwe unoona chabon ipapo, yakamira nekuzvininipisa kukuru, ichifamba senge yaive kumba. Kwandiri iye inyanzvi iyo vashoma kwazvo vanonzwisisa.
Kubatanidzwa kwedhijitari kwakakosha uye mhinduro chete isoftware yemahara. Iko hakuna imwe sarudzo inoshanda yekudzidzisa vana pane yemahara software. Chero kuyedza kuisa software yeupenzi kupusa zvachose.
S [e] C akadaro
Vhiki rapfuura ndanga ndichitaura nedzimwe shamwari uye ndikati kune imwe: "Ndanga ndichishandisa fedora kwemwedzi mishoma," uye mumwe wandaishanda naye kubva kuUni uyo aive nesu akandiudza kuti: "Ndeapi mahwindo? Iyo nhanho yedzidzo maererano yemahara software ichiri yakawandisa ... ndinovimba nenguva zvese izvi zvichachinja.
Pindura kuna S [e] C
Ndinofunga kuti ane kuzvininipisa kushoma, kuzvitutumadza uye kudada sezvo ari ega. Nekuti kupfeka hembe nejean hazvireve kuti unozvininipisa, kuzvininipisa kunouya kubva kune rimwe divi.
Kudos yemukomana akabvunza nezve kusashanda.
Chinyorwa chakanakisa Naty. Chokwadi ndechekuti Stallman haafanire kugutsa chero munhu nezvehuzivi hwake: iwe unofanirwa kudzidzisa nekutungamira nemuenzaniso.
Mubvunzo wandinogara ndichizvibvunza ini: sei Hurumende ichishandisa mamirioni nemamirioni emadhora pasoftware yekudyara ichikwanisa kuwana mahara, mhando uye zvakanyorwa-zvakanaka mahara software. Vakataurirana vanababa, ndosaka zvinhu zvisina kuchinja. Chero bedzi paine makambani nemari pakati, zvakaoma zvikuru.
Yemahara Software ndeyekuchengetwa nekuti haina kutariswa munzvimbo inowanikwa veruzhinji uye ine muridzi wekodzero anoiburitsa pasi pemamiriro erezinesi reGPL kana imwe yakafanana, panguva ino inova yemahara, nekuda kwechikonzero ichi software yepfuma inonzi ndiyo inopesana neyemahara software.
Esty, ndiregerere, asi urikuita kunge troll.
@Olovram: Hazviite senge troll maitiro kwandiri, akangopa pfungwa. Huya, mukomana haasi mwari.
Chinyorwa chakanaka kwazvo Naty
cite = »Shanduko iri muzvizvarwa zvinotevera. Ngativei nechinangwa chekusimbisa dzidziso yemahara software muzvikoro, kubva kumatanho epamusoro. » Bvumiranai zvizere: vhiki rino ndakave nemufaro wakakura wekuti mumwe wevadzidzi vangu vane makore gumi nemaviri akaisa OS yemahara pamushini wake wemba, dai zvisiri izvo zvidiki zvekubvisa win $ (izvo zvakanditungamira ku kuisirwa bhutsu mbiri ine win + Tuquito 12) ndinokuudza, ibasa rakawanda kudzidzisa asi mhedzisiro yacho inoshamisa, vana vane hunyanzvi, imwe N @ ty zvangoitikawo: haisi chinhu chisingafungidzike
Pindura kuna deby.nqn
*** Sei ndichinja nzira yandinoita nayo zvinhu zvandinoita kune imwe iyo inotora nguva yakawanda uye isingashande? ***
Mubvunzo wakanaka, uye zvakafanana zvinogona kunyorera linux, handiti? Nei uchisiya XP inoshanda kwazvo kune distro X kana Y?
Mhinduro yacho ndeyakareba uye inofinha, asi ivo vakatozvitaura muchikamu chiri pamusoro, dzidzo, kuudza vanhu kwazvinobva, nei zvakatangira, zvayinotarisira, uye yakareba nezvimwe ... izvo zvakakosha zvakakosha.
Kana ivo vasingazive zvauri kutaura nezvazvo kana kuti vanokunzwisisa sei, muchidimbu ini handishoropodzi RMS kana ikasadzivirira mhosva yaS SL chete ndiani achazviita.
Yakanaka mushumo xD kwaziso.
@Olovram: Huya, mukomana haasi mwari.
asi kana iine (ona wega pikicha) XDDDDDDDDDDDDDDDDD
chokwadi chinondinetsa (zvakawandisa) kuona vanhu avo vasingade kudzidza, havadi kuziva, asi kana iwe usinga "vadzidzise" ivo vanotsamwa.
vanhu vashoma vanofarira kuziva kuti SL chii, havasi vanhu vazhinji vane pfungwa dzakavhurika, vashoma vanhu vanobvunza zvinhu ...
chauri kuda kushandura Software, chaunoda shanduko, maona, pasina French Revolution kwaizove kwakaomarara kusvika kune izvi ... uye kumwe kumukira.
Dzidziso yekushanduka-shanduka iri kwese kwese, asi munhu anokwanisa kushanduka kwete panyama chete, asi nenjere, uye sekunge pasina mumwe munhu, anokwanisa kusarudza nzira nenzira yake.
RMS "nyika" haisi munhu anoshanda, asi hazvigone kuenda munzira imwechete, inoda shanduko, shanduko, shanduko yechisimba uye yakadzama, sekutaura kweRAE.
Nenzira, pane chero munhu anoziva kana paine vhidhiyo yehurukuro musi wa 24 pa Ministry yekunze iripo?
Pindura kuna Nadius
Ndinoyemura VaStallman zvakanyanya, VaGNU ...